Yazi iMini Golden Retriever - Izinhlobo
Yazi iMini Golden Retriever
Wake wafuna ukuba nomnikazi weGolden Retriever enhle, enobungane, futhi ehlakaniphile, kodwa wafisa ukuthi ibe ngosayizi omncane futhi ophathekayo?
Abafuyi abancane beGolden Retriever babenalokho engqondweni lapho bedala le hybrid. Bafuna i kunempilo futhi kuhlangene inguqulo ye-purebred ethandwayo.
Kule ndatshana, sizothola okuningi ngale nja yomklami, kusuka kumaqiniso eMini Golden Retriever kanye nemvelaphi yohlobo lokuzuza nobubi nobubi beMini Retriever.
Yini i-Miniature Golden Retriever?
Yenziwa kanjani i-Miniature Golden Retriever?
Iba nkulu kangakanani iMini Golden Retriever?
Ngabe i-Miniature Golden Retriever ibukeka kanjani?
Yini ubumnene beMiniature Golden Retriever?
Ingabe i-Miniature Golden Retriever iyinja enempilo?
Uyinakekela kanjani i-Miniature Golden Retriever yakho?
Ngingamtholaphi umfuyi weMini Golden Retriever?
Ingabe kufanele uthole i-Miniature Golden Retriever?
I-Mini Golden Retriever ( umthombo )
I-Mini Golden Retriever idabula phakathi kweGolden Retriever (Golden) ne UCocker Spaniel noma a Poodle .
Lezi zinja zibizwa nangokuthi i-Small Golden Retrievers, i-Petite Golden Retrievers, noma i-Little Golden Retrievers.
Igama elithi 'Comfort Retriever' libhalwe uphawu lweMini Goldens ekhuliswe kuphela eGolden Retrievers nasePoodles.
Abafuyi babona ukuthi yonke imidlwane yeMini Retriever iyathola U-50% kuya ku-75% wezakhi zofuzo zeGolden Retriever ngakho-ke i-pup isethubeni elikhulu lokuzuza ifa le-purebred's character and temperament.
Lesi yisiphambano esisha. UKathy Burgess wakhiqiza iComfort Retriever yokuqala ebhalwe ngo-2003.
I-Standard Golden Retriever yeqiwa neCocker Spaniel kwakhiwa inja encane, eyayibizwa nge IGolden Cocker Retriever.
Ukuphikisana nezinja zabaklami
Pocket Pitbull - I-American Pit Bull Terrier ne-Patterdale Terrier Mix ( umthombo )
Kungani kukhulunywa kakhulu kangaka ngama-hybridi afana neMini Golden Retriever?
Ukuqonda impikiswano ngalawa ma-canine athandwayo, kufanele sichaze masinyane ukuthi iyini inja yomklami noma i-crossbreed.
Izinja zomklami bayinzalo yemihlobo emibili emsulwa. Lezi nzalo zakhula zathandwa ngawo-1980 futhi zihlala zifunwa kulezi zinsuku ngoba zinikela ukulinganisela komzali wabo kuzala izimfanelo .
Izibonelo zezinja ezidumile zabaklami zifaka phakathi Imvu yezimvu kanye ne- Pocket Pitbull .
Ngokwesinye isandla, ama-purebreds - njenge Shih Tzu kanye ne- Weimaraner - ube nohlu lozalo olubhaliwe. Ukuzala kwenziwa ngokucophelela ezizukulwaneni ngezizukulwane ukukhiqiza izinja ezinazo izici ezifanayo zomzimba nobumnene .
Ama-Purebreds avamise ukubhaliselwa amakilabhu okuzalela njenge-AKC ne-United Kennel Club.
Abathandi abaningi be-canine baxwayisa ngabafuyi abathi unakekele inzuzo kuphela futhi hhayi ngempilo ephelele nokuphila kahle kwezinja zabaklami abazidalayo. Bakhathazekile ngabalimi abagxila kakhulu kulokho okubukeka kukuhle kunasekubumbaneni ukuze benze inja entsha enempilo.
Okwamanje, abameli bezinja abaklami bathi ukuzalanisa izitshalo kuzothuthukisa impilo engcono kuma-canine ngenxa yokuhluka kofuzo futhi kuyakhuthaza umdlandla we-hybrid .
Ukunqamula isiphambano kuthiwa kunciphisa amathuba okuthi imidlwane ithole izakhi zofuzo ezidala izinkinga ezithile zezempilo zohlobo lwezinja.
Ngokuqondene neMini Golden Retriever, inhloso enkulu yomfuyi imvamisa ukudala inguqulo encanyana yeGolden Retriever nayo ukhipha okuncane (ngakho-ke ukusetshenziswa kwePoodle).
Abazalisi abadumile bala maPetite Retrievers baqinisekisa ukuthi imidlwane iphilile ngangokunokwenzeka futhi iyahlolwa ukuze kukhishwe izimo zofuzo.
Bheka ukuthi i-Miniature Golden yavela kanjani:
Noma ngabe iyathandeka kangakanani, le nguqulo encane yeGolden Retriever iyi ayibhalisiwe ne-AKC .
I-AKC ithuthukisa ukugcinwa kwamazinga akhethekile ohlobo lweGolden Retriever futhi ayibasekeli abalimi abakhetha ukuchezuka kula mazinga.
Ngakho-ke yini eyenza umdlwane omncane weGolden Retriever? I- UCocker Spaniel kanye ne- Poodle yizinketho ezimbili ezithandwa kakhulu ekwakheni lesi silwanyana esincane.
Kepha, okokuqala, ake sazi ugqozi lwale hybrid encane, i- IGolden Retriever .
IGolden Retrievers yaqala ukufuywa EScotland maphakathi nekhulu le-19 lapho ukuzingela izinyoni kwakuwumdlalo othandwayo wabacebile.
Izicukuthwane zazifuna ukuba nenja eyayingeyona i- an umngane omuhle kakhulu wokuzingela kodwa futhi bekujabulela ukugijima nokubhukuda. Lezi zinja zathola igama lazo ngokukwazi 'ukubuyisa' izinyoni ezidutshuliwe ngaphandle kokuzilimaza.
Kulezi zinsuku, abakwaGolden Retrievers bangezinye zezinhlobo zezinja ezaziwa kakhulu emhlabeni. Eqinisweni, lezi enobungane, nomnene ama-canine abamba indawo yesi-3 kuma-AKC uhlu lwezinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu ngo-2017.
IGolden Retriever esekhule ngokugcwele ingaba nesisindo esingafinyelela kumakhilogremu angama-34 futhi ibe nesilinganiso esingamasentimitha angaba ngu-62.5 ubude.
Lokhu nakanjani kuyinja enkulu engaba kakhulu ukubaphatha abanye abantu.
NgeGolden Retriever’s ukubukeka okuhle nobumnene obuhle , akumangalisi ukuthi kungani abalimi befuna lezi zimfanelo ezinhle ephaketheni elincane
I-Cocker Spaniel emnandi, edlalayo
Okokuqala ukukhuliswa njengezinja zokuzingela ngekhulu le-14, uCocker Spaniels kwakungokokuqala kokukhethwa kwabafuyi ababefuna ukudala inguqulo encane yeGolden Retriever.
Akukona ukukhetha okumangazayo njengoba kunokufana okuningi phakathi kweGolden Retriever neCocker Spaniel.
ICocker Spaniel, noma ngabe I-English Cocker Spaniel noma i-American Cocker Spaniel, ngokuvamile ine- ujabulile, uyadlala imvelo futhi yaziwa ngokubukeka kwayo 'okuhle'.
Ukuthandwa kohlobo kukhuphuke kakhulu lapho i-movie yeDisney ILady neTramp kwaphuma ngawo-1950, kanti uCocker Spaniel uyaqhubeka nokujabulela ukuqashelwa namuhla.
Isigamu esilingana neGolide, uCocker Spaniel okhule ngokugcwele unesisindo esingamakhilogremu angama-25 kuya kumakhilogremu ayi-11 kuye kwayi-13 futhi ulinganisa amasentimitha ayi-13 kuye kumasentimitha angama-15.5 (amasentimitha angama-33 kuye kwangama-39).
Okwabo usayizi ongalawuleka ngokwengeziwe , kanye nobumnene babo, benza uCocker Spaniels abe ngumlingani ofanelekayo weGolden Retriever ekuzaleni iMini Golden Retrievers.
I-Poodle ehlakaniphile, eqotho
Ama-Poodle bekuyikhetho lesibili ekwakheni iMini Golden Retriever. Abanye abalimi bakhethe ukungahambi neCocker Spaniel ngenxa yokuthambekela kukaSpaniel wokuncipha noma ukuluma.
Sekuyisikhathi eside ama-Poodle ayintandokazi eYurophu, lapho ayejabulela khona ukuthandwa ngisho nasenkantolo yeNkosi uLouis XVI waseFrance.
Lezi zinja zaziwa ngezabo ubuhlakani nokuqapha ; empeleni, amaPoodle abekwe ohlwini njenge- Uhlobo lwenja yesibili ehlakaniphile , ngemuva nje kwe- Umngcele Collie .
Ama-Poodle ayaziwa nangawo amajazi aphansi , yingakho lezi zinja ezibizwa nge-hypoallergenic zivame ukusetshenziselwa ukuzalanisa
I-Standard Poodle ekhule ngokugcwele isisindo esingamakhilogremu angama-40 kuye kwangama-70 (18 kuya kuma-31 kilogram) futhi ilinganisa amasentimitha angama-38 ukuphakama.
I-Mini Golden Retriever ekahle isisindo Ama-20 lbs kuya kuma-55 lbs (9 kuye ku-25 kg), nezinyathelo Amasentimitha ayi-12 kuye kwayi-15 (30 cm kuya ku-38 cm) ukuphakama.
Ziyizinja ezincane ukuya ezilinganisweni eziphakathi nendawo, futhi ubukhulu bazo ngqo buncike ezinhlotsheni zabazali bazo.
Ama-Teacup noma ama-Toy Golden Retrievers
I-Toy Golden Retriever ( umthombo )
Ngenxa yokuthandwa kwezinhlobo zetiye njenge I-Teacup Maltese noma Teacup Chihuahua , sekuvele kaningana umbuzo we-teacup Golden Retrievers.
Kepha ungacabanga ngempela ngeTeacup Golden Retriever? Nathi ngeke sikwazi.
Abanye abalimi baphikisana ngokuthi lokhu kuzoba nomngcele ukuzalanisa okungenasimilo njengoba i-Golden Retrievers ihloselwe ukuba yizinja eziphakathi nendawo ezingabangane abakhuthele.
I-teacup noma ithoyizi i-Golden Retriever ingaba kude kakhulu nosayizi wokuqala we-Golden Retriever, ngakho-ke kungenzeka ukuthi imiphumela yezempilo lokho kungathinta inja impilo yonke.
Ukuzalisa inja enosayizi ophakathi kuya kusayizi wetiye akukhuthazwa. Musa ukuthenga umdlwane ngoba kuzoba kuhle ukuwubheka.
Njengomnikazi wenja onomthwalo wemfanelo, kufanele futhi ucabangele ikhwalithi yempilo isilwane sakho esizoba nayo.
Ukubuyiselwa Kwegolide Okumnyama
Ama-Dwarf Golden Retrievers angamaGoldens athinteka ngobufushane. Ubunzima noma i-achondroplasia yisimo esichazwa njengokungathuthuki kwamathambo. Kuyisimo lapho amathambo engakhuli abe ngosayizi olindelekile.
I-dwarfism iwuhlobo oluthile ‘ umagazine ’Noma ukungajwayelekile ekukhuleni nasekhuleni kwethambo noma uqwanga noma kokubili.
Izinja ezine-osteochondrodysplasia zingahlupheka ubuhlungu nokungahambi kahle kuya ngobukhulu besimo. Kwezinye izimo, izinja kudingeka ukuthi zihlinzwe.
Kunezici eziningana ezidala ukufiphala. Ubudlova bunjalo ifa kakhulu futhi kungadluliselwa kusuka ebulilini. Kuthatha kuphela umzali oyedwa ukuphatha izakhi zofuzo ukuze ingane ithinteke.
Abanye abakhiqizi abasemagcekeni baze bafike ekwethuleni isakhi sofuzo esidala ukuthi ubufishane bakhe i-Golden Retriever encane.
Lolu hlobo lokuzalanisa nalo alukhuthazwa njengoba inzalo ingahlupheka ngezinkinga zezempilo ngenxa yalolu hlobo lofuzo.
I-Dwarf Golden Retriever ( umthombo )
Ezinye izimpawu zokuthi umdlwane wakho kungenzeka ukuthi uhlupheka ngobufushane:
Imilenze emifushane enomzimba omude
Ikhanda elikhulu futhi elibanzi
Amazinyo agobile ngenxa yomhlathi omfishane
Ukuma kwethambo okungavamile
Ukukhula kabi noma ukungakhuli
Lezi zimpawu zizobonakala ezinjeni e Izinyanga ezimbili kuya kwezingu-3 ubudala . Indlela ecacile yokuqinisekisa ukuthi uzoba nenja enempilo ukuthola umdlwane kumfuyi onedumela. Abafuyi abathembekile kufanele bakwazi ukunikeza umlando ophelele wezokwelapha wabazali be-pup nezimvume zezempilo zenja oyicabangayo, nayo.
Njenganoma iyiphi i-hybrid, indlela i-Mini Retriever puppy yakho ebukeka ngayo ikakhulu kuncike ekwakhekeni kofuzo . Bangabukeka kakhulu njengoCocker Spaniel wabo noma umzali kaPoodle kuneGolden Retriever.
Ukuze sithole umbono ongcono ngokubukeka kwalezi zingxubevange, ake sixoxe ngokubukeka kwabazali bazo.
Ukubuyiswa Kwegolide Okuncane ( umthombo )
Izici iMini Golden Retriever ingazuza njengefa kubazali bayo
Izindinganiso zokuzalela ze-AKC zinencazelo enembe kakhudlwana yeGolden Retriever, kanti inzalo yeGolden ingathola ezinye zalezi zimfanelo zomzimba.
IGolden Retrievers ine ugebhezi olubanzi ngomlomo oqondile . Amehlo abo ansundu anobungane futhi ahlakaniphile ngokubonisa. Amanye amaPetite Golden Retrievers angathatha ngemuva kweCocker Spaniel futhi abe nxazonke, amehlo azwakalayo .
Eziningi zalezi zimbewu ezincane ezivundlile zinayo izindlebe ezinde , njengeGolden, iCocker Spaniel, nePoodle.
Yize zincane, lezi nzalo zingahle zibe nemizimba elinganiselwe kahle, eminyene kanye amahlombe aqinile futhi anemisipha yabazali babo baseGolide.
Ama-Mini Golden Retrievers amaningi adla ifa likaPoodle lokuziqhenya, elincishiswe ukubukeka okuhle kweGolden neCocker Spaniel.
Njengoba izinhlobo zabazali bazo zinoboya obukhulu, obude, lezi zinja zivame ukuba namajazi anezimfanelo ezifanayo. Eziningi zazo zinezinwele ezinombala wegolide one- wavy, curly, noma iqonde ukuthungwa.
Ngenxa yabazali babo bePoodle, nabo mancane amathuba okuthi babange ukungezwani komzimba. Kwesinye isikhathi, iMini Golden Retrievers ibhekwa njenge- i-hypoallergenic crossbreed .
IGolden Cocker Retriever
Ama-Cocker Spaniels anemibala ehlukene, kepha amaCocker Spaniels anamajazi egolide asetshenziselwa le hybrid ukufeza ukubukeka kweMicrosoft Golden Retriever yakudala.
Eyaziwa nangokuthi iDakota Sport Retriever, i- Ukuhlanganiswa kweGolden Retriever & Cocker Spaniel kungenzeka ube nayo izindlebe eziqhakazile, izinwele ezinde zegolide, namehlo azwakalayo .
IGolden Cocker Retriever ( umthombo )
Njengoba sike sasho phambilini, uma bezalwa kwaGolden Retrievers nasePoodles, lezi zinja zibizwa ngeComfort Retrievers.
Le hybrid ingabukeka yehluke kancane kwiGolden Retriever, njengoba amaPoodle neGolden Retrievers enezimo ezihlukile zekhanda.
Lindela ukuthi ijazi labo libe njalo curlier noma ube nokuthungwa kwe-wavy .
Ukuhlanganiswa kwe-Golden Retriever Poodle ( umthombo )
Uyini umehluko phakathi kweMini Golden Retriever neGoldendoodle?
Yize iMini Golden Retriever neGoldendoodle babelana ngabazali abafanayo, abafani.
Izinja ezimbili zinokufana okuningi ngokuya ngobumnene kanye nezidingo zazo zokuzilungisa nokuzivocavoca umzimba.
Umehluko omkhulu phakathi kwalaba ababili ngukuthi iMini Golden Retriever inezakhi zofuzo ezingaphezulu zeGolden Retriever , kuyilapho amaGoldendoodles enePoodle eningi kuwo.
Kepha, njengokubukeka kwayo, ubuntu bephuphu le-Mini Golden Retriever bunomthelela kubazali balo.
IGoldens ikhona ukuzola nokubekezela ezungeze izingane, ezenza izilwane ezifanelekayo zomndeni. Lezi zinja zisebenzisa wonke amathuba ukwenza imindeni yazo ijabule futhi zikhula ngokunakwa ngabantu.
Ngakolunye uhlangothi, iCocker Spaniel ifana ne- onothando futhi ulangazelela ukujabulisa ubuntu beGolden Retriever.
Ama-Poodle anjalo uqotho futhi unobungane njenge-Golden Retrievers, kepha ama-Poodles ngokuvamile azoxwaya kakhulu kubantu ongabazi.
IMiniature Golden Retriever yazuza njengefa ubuntu obuhle, nobumnene babazali bayo.
Ngokusho kwe-AKC, bobabili uGoldens noCocker Spaniels bayizinja zemidlalo, iqembu elaziwa ngokuba yizilwane ezifuyiwe. Lawa ma-canine athandeka njenge esebenzayo ngokwemvelo futhi uqaphile .
AmaGold Retrievers, amaCocker Spaniels, namaPoodle izilwane ezifuywayo ezinhle zabanikazi bezinja okokuqala ngqa . Lawa ma-purebreds ayaziwa futhi ngekhono lawo lokuzwana nezingane.
Akumangazi ukuthi iMini Golden Retrievers izuze zonke lezi zimfanelo ezinhle. Iningi labo line- ukudlala, imvelo ephumayo futhi wenzele abangane abahle kakhulu, ikakhulukazi abanikazi abakhuthele ngokomzimba.
I-Miniature Golden Retriever inempilo ejwayelekile Iminyaka engu-10 kuya kwengu-15 . Ubungqabavu be-hybrid bungazenza lezi zinhlobo eziwela kahle ziphilile, kepha zisabhekene nezinkinga zezempilo zezinhlobo zabazali bazo.
Kuyasiza impela ukubheka izimo zempilo abazali babo abangabhekana nazo.
Izinkinga zezempilo ezivame kakhulu zeGolden Retrievers
Izimila zamangqamuzana amancane
Izinkinga zezempilo zeCocker Spaniels
Izimo ezejwayelekile zezempilo zama-Poodle
Ukunakekela i-Little Retriever Encane kungathatha isikhathi esiningi nomzamo kunalokho okulindele.
Kodwa-ke, lezi zinja nakanjani zizokwenzela uthando nobungani.
Izidingo zokuzilungisa zeMini Golden Retriever
Yize iMini Golden Retriever ingaba yi-hypoallergenic, ungalindela ukuzilungisa okunzima ngale hybrid njengoba zonke izinhlobo zabazali bayo zinamajazi okulungisa okuphezulu.
Ukuxubha ijazi nsuku zonke kufanele kube yingxenye yesimiso sakho uma unquma ukuthola i-Small Golden Retriever.
Ukuxubha njalo kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izinwele zabo zihlala kucocekile futhi akunantambo . Kuqinisekisa ukuthi izinwele zabo azinamafindo, okungaba buhlungu enjeni yakho.
Ukuzilungisa njalo kuvimbela ukuchitheka ngokweqile kuyo yonke indlu yakho, futhi. Kungase kudingeke nokuthi uthole umkhwenyana okhokhelayo endaweni yakho ukuze unqume ijazi lenja yakho ngezikhathi ezithile futhi uligcine ngobude obulawulwayo.
I-Mini Golden Retriever idinga ukuzivocavoca okungakanani?
Lawa ma-canine awawona amazambane asofa, ngakho-ke ungalindeli ukuchitha isikhathi esiningi upholisa ekhaya nenja yakho.
Njenge-Golden Retriever ejwayelekile, lindela ukuthi iMini Golden Retriever yakho ibe unamandla kakhulu inja ethanda ngaphandle.
Lindela ukusebenzisa imali okungenani imizuzu engama-30 ekudlaleni okusebenzayo ukusebenzisa wonke amandla abo we-pent-up.
I-Mini Golden Retriever yakho izothanda ukuchitha isikhathi nawe ekuhambeni noma ekugijimeni.
Ukubhukuda kuyinto futhi ezothokozelwa yile pooch, ikakhulukazi kumxube weGolden Retriever noPoodle, njengoba bobabili abazali bayo babekhuliselwe imisebenzi yamanzi.
Ukuqeqesha iPetite Golden Retriever yakho
I-Miniature Golden Retriever kulula ukuyiqeqesha njengoba kunjalo ngezinhlobo zayo zabazali uhlakaniphile ngobuntu obukhuthalele ukujabulisa .
Njengenjwayelo, ukuqinisa okuhle kuyindlela engcono yokuqeqesha i-pup yakho futhi wenze induku yokuziphatha okuhle.
AmaComfort Retrievers kungenzeka azuze ubuhlakani babazali bawo, izinhlobo ezimbili zezinja ezihlakaniphe kakhulu namuhla.
IGolden Retrievers iyaqeqeshwa kakhulu futhi yenzelwa okuhle kakhulu izinja ezisebenzayo , evame ukusetshenziswa njengabangane abazingelayo, izinja zamaphoyisa, izinja zokwelapha, kanye izinja eziholayo zezimpumputhe .
Futhi, njengoba sishilo ekuqaleni, amaPoodle aziwa kakhulu ngobuhlakani bawo, nawo.
Akunandaba ukuthi ukhetha yiphi i-Mini Golden Retriever, uzoba ne- uyalalela, uziphethe kahle canine ekhaya.
Ukuba nenja ukuzibophezela ngokugcwele futhi konke kuqala ngokuthola umfuyi onedumela ukuze aqiniseke ukuthi ingane yakho isusiwe ezimeni zofuzo.
Imidlwane iMini Golden Retriever ingahle ibe nentengo efinyelela ku- $ 1500 ngayinye, yize amanye ama-Comfort Retriever pups enamanani entengo aphezulu angafika ku- $ 5000.
Naba abalimi abambalwa abanezinja zeMini Golden Retriever ezithengiswayo.
Ukududuza Ukubuyisa (EKentucky)
Ama-Acres Afihliwe (EVirginia)
I-Taylormade Miniature Golden Retrievers (Utah)
Abaduduzi Benduduzo ( umthombo )
Kunzima ukungahambi kahle ngokukhetha lezi zinja ezincane, njengoba izinhlobo zabazali bazo - iGolden Retriever, iCocker Spaniel, nePoodle - konke ngisho nesimo sengqondo futhi ukubukeka okuhle .
Yini okungafanele uthande ngenguqulo encane yeGolden Retriever?
Lawa ma-canine athandekayo yiwo enobungane futhi ehlakaniphile futhi benza izinja ezinhle zomndeni ezilungele abanikazi abathanda ukuchitha isikhathi bezivocavoca umzimba.
Kodwa-ke, lezi zinja zidinga nokuzilungisa okuningi ngenxa yazo amajazi aminyene .
Unayo iMini Golden Retriever? Sifuna ukwazi ngakho! Sitshele ngenja yakho esigabeni sokuphawula.
inja yami izoba nkulu kangakanani
umdlwane wokubala isisindo ngohlobo
izithombe zezinhlobo ezahlukahlukene zama-pit bulls